Toyota Premio 2011 အား ချမ်းမြသာစည် တွင်​ ipivi.com မှတဆင့်​ ဝယ်​ယူပါ။
ရောင်းချသူ: Ko Tin Htun
Good Condition -Power Steering,Air Con,Power Window,Air Bags,Original TV, Back Camera,ကားကောင်းကားသန့် ။ PREMIO. 1800 cc ထဲ မှာအမြင့်ဆုံးဂရိတ်နဲ့ အရောင်လေးကလည်းဘိုဆန်တယ်လို့ပြောရမလား (GRAY MET Colour) ၊ ကီလို ၆ သောင်းကျော်အမှန်
2011.2WD. EX grade
Original TV & Back camera, Push start, Digital air con, Leather steering, Steering valume, Seat motor, Round soner, Original Alloy wheel,